Usoro Betic: njirimara, mbido na ụdị nke nkume | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka ya Betic usoro. Gburugburu ala ya, ugwu a sitere na Gulf of Cádiz ruo na Valencian Community na akụkụ ndịda nke agwaetiti Balearic. N'ebe ugwu, ha nwere oke Guadalquivir Basin na mpaghara ndịda nke Iberian massif na Iberian System, ebe Osimiri Alboran dị na nsọtụ ndịda. Agbanyeghị, dịka Pyrenees, dị ka ala, ọ gafere ókè ala, gbasaa na ndịda na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke Osimiri Alboran, akụkụ akụkụ nke ihe owuwu ya anaghị akwụsị na ala nke Oke Osimiri Mediterenian. Na akụkụ nke Balearic promontory na agwaetiti ahụ nke Mallorca.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara usoro Betic, njirimara ya na mkpa ya.
2 Nhazi nke usoro Betic
3 Mpaghara nke Betic system
3.1 Mpaghara mpụga
3.2 Mpaghara mpaghara
Ugwu ugwu a bụ nsonaazụ nke usoro mkpakọ malitere na njedebe nke Cretaceous ihe dị ka 100 nde afọ gara aga na ọ kachasị emetụta akụkụ ugwu na ndịda nke Mpempe Iberian. Ọdịdị ya na mmalite mgbanwe sitere na ya gbagwojuru anya n'ihi na ọ bụ nsonazụ nke nnukwu mbadamba abụọ na ngọngọ kọntinent, taa Alboran microplate, nke mejupụtara eriri dị n'ime ugwu ahụ, kwagara ọdịda anyanwụ wee mechaa daba n'akụkụ Mesozoic. na n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ Africa, na-akpụ ugwu ugwu Betica-Rifeña.
Otu ihe dị ịtụnanya na ọkwa cortical bụ na enweghị ụdị mgbọrọgwụ achọpụtara n'okpuru ugwu, dị ka ọ dị na sistemụ ndị ọzọ nke ugwu ugwu. N’agbanyeghi na enwere ike ichota nkpuchi nke akpukpo aru, o ghaghi kilomita 40 na nke obula. Eziokwu ọzọ dị ịrịba ama na ọkwa cortical bụ ngwa ngwa ngwa ngwa nke enwere ike ịhụ na mpaghara oke osimiri. ebe ọkpụrụkpụ nke jikọrọ ọnụ dị gburugburu 22 kilomita. Mpaghara ahụ, na-aga n'ihu n'ime ime mmiri Alboran ebe ọ rurula nke pere mpe, ịdị kilomita 15.
Nhazi nke usoro Betic
N'iburu njirimara ndị a nke ngalaba cortical na iji ụfọdụ ụkpụrụ na usoro ihe arụ, ọ dugara ịmata ọdịiche nke usoro Betic dịka na Rif abụọ nnukwu mpaghara yana ụmụaka dị iche iche ma kewaa site na kọntaktị tectonic. Ọzọkwa, mpaghara abụọ a nwere mmalite dị iche iche paleogeographic. Ka anyị hụ ihe mpaghara abụọ a ma ọ bụ ngalaba:
South Iberian Domain ma ọ bụ Mpụga Mpaghara: Mpaghara ndị a dị iche na ugwu abụọ ma ọ bụ Mesozoic na Cenozoic na-etolite nkume ndị na-agagharị ibe ha ma na-apịaji na-enweghị ụdị metamorphization nke kwekọrọ na mmiri mmiri Tethys.
Ngalaba Alboran ma ọ bụ Mpaghara Esịtidem: a mejupụtara mpaghara ndị a. Kwado mantles mbuze na ihe ndị bụ n'ụzọ dị ịtụnanya. Mmalite sitere na mbugharị nke microplate Alboran nke dị n'ihu ọwụwa anyanwụ.
Na mgbakwunye na mpaghara ndị a buru ibu, anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti usoro Betic mpaghara ndị ọzọ dịka ndị a:
Furrow nke Flyschs nke Campo de Gibraltar: ọ nweghị ngalaba aha a na-ekwu na ya ebe ọ bụ na ụdị eriri dị na ya dị ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịma ya, ọ na-ahụkarị na ugwu abụọ ma dị n'akụkụ abụọ nke Strait nke Gibraltar.
Depda mba Post-orogenic: ndị a depressions bụ nke neogene na quaternary sediments. Ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ndị a emepụtara site na mbuze nke ihe enyemaka na mpaghara gbara ya gburugburu. Ọ dị iche na nnukwu bekee dị iche iche 3030 30 n'ugwu dị iche iche -Dression nke Guadalquivir- na mpaghara ndị ọzọ dị omimi -Dression nke Granada, Guadix-Baza, Almería-Sorbas, Vera-Cuevas de Almanzora na Murcia tumadi.
Neogene-Quaternary mgbawa ugwu: A na-anọchi anya ya na mpaghara Cabo de Gata na Murcia. Ugwu a na-adabaghị na ngosipụta mgbawa postogenic metụtara tectonics na-adịbeghị anya n'ihi ọtụtụ mgbanwe efere.
Mpaghara nke Betic system
Anyị ga-enyocha mpaghara nke usoro Betic na njirimara ha. Anyị na-amalite na mpụga ebe.
Ha bụ nkume Mesozoic na Cenozoic sedimentary, nke kachasị na mmiri sitere na mmiri, bụ nke e guzobere na Tethys basin na mpaghara kọntinent nke ndịda Iberia, ma debe ya na ogige alpine. Ha ogide nnukwu ndọtị nke ugwu ugwu na-anọchi anya oge etiti oge si Triassic 250 nde afọ gara aga na Miocene.
Ha na-eweta usoro nke njirimara dị n'etiti okpuru ulo (Paleozoic varisco) na nkume na-adịghị mma (folds, faults and pushing mantle). Palọ okpuru Paleozoic apụtaghị ma dịrị na omimi nke kilomita 5-8, nke okwute ndị yiri nke Iberian Massif guzobere. Si mbụ ọnọdụ nke nwughari unit, ihe mbụ bezin na a kehoraizin ndọtị 2-3 ugboro ukwuu karịa nke ugbu a.
A na-ahụ nrụrụ nke afọ dị iche iche. N'ime oge Jurassic, enweghi nsogbu nke mere na nkewa nke Tethys Basin na mpaghara nke dị iche iche dị iche iche. Nkwalite ahụ malitere na Cretaceous wee gaa n'ihu na Paleogene. Ikpeazụ na isi ogbo nke ndozi mere na Miocene, nke dugara a nile uplift nke ugwu.
Ọ dị na nsọtụ ndịda nke ugwu ugwu Betica, gbasapụ site na Estepona (Malaga) n ’ọdịda anyanwụ ruo Cape Santa Pola n’etiti Murcia na Alicante n’ọwụwa anyanwụ.
Mpaghara paleogeographic nke ime n'ime malitere n'ihu ọwụwa anyanwụ ma bụrụ akụkụ nke Alboran ma ọ bụ Mesomediterranean microplate. Site na mmechi nke osimiri ochie ahụ Tethys, microplate a dịpụrụ iche site na ugwu ọwụwa anyanwụ Africa kwagara n'azụ n'ihi mmegharị mgbanwe. Nkume Paleozoic na-apụta n'ime mpaghara nke microplate a, bụ nke a na-apịaji ya n'oge Varisca orogen, ma mebie ma megharia n'oge Alpine Orogeny.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkume Mesozoic dị na mpaghara dị n'ime, na-adaba na sedimenti ndị echekwara n'akụkụ microplates ma ọ bụ n'oge mbugharị na mbido ụzọ ha. Triassic dị iche na usoro Betic ndị ọzọ, ebe ọ bụ na e mere ya ntọala site na clastic rock na ndị ọzọ nke dolomite. Nkume ndị Jurassic na Cretaceous bụ nkume carbonate. Ke ofụri ofụri, e wezụga ụfọdụ esemokwu Eocene patches na mantle, Paleogene sedimenti na-efu efu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Betic system yana njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Betic usoro